Usoro akwukwo akwukwo ohuru »Mahadum Hodges
Usoro Mmụta Ọhụrụ nke Mahadum Hodges (NSO) na-enyere Hodges 'Hawks aka n'ịkwadebe maka ahụmịhe agụmakwụkwọ gị!
Mkpọchi ndị a ga - eduzi gị na usoro ahụ ma nye ozi dị mkpa gbasara Mahadum anyị. Bido ugbua ma gaghachị n’oge ọ bụla ịchọrọ enyemaka.
Ozi sitere n’aka Onye-isi-nduzi Dr. Meyer
Mahadum Hodges - ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ onwe ha - na-akwadebe ụmụ akwụkwọ ka ha nwee ike ịkwalite mmụta ka elu na mbọ ha, ọrụ aka ha na nke obodo ha.
Iji mụtakwuo ihe kpatara Mahadum Hodges ji bụrụ mahadum pụrụ iche na Southwest Florida, pịa Ebe a.
Zute Onye isi ala
Mara ogige gị
Ndebanye aha n'ịntanetị
Mara Banyere ogige anyị
Ulo Oru Fort Myers U na H
Fort Myers Campus Owuwu U
Enyemaka Ego na Akaụntụ Mmụta
Ọrụ ụmụ akwụkwọ, onye na-edeba aha, na nnabata
Mmụta Ahụike Mmụta Ahụike Mmụta - U
Debanye aha na ntanetị site na HU Self-Service!
HU Ọrụ Onwe-enye gị ohere ịdebanye aha ma ọ bụ rịọ ndebanye aha maka usoro ọ bụla na nnọkọ na-abịanụ, 24/7, 100% n'ịntanetị:
Banye na mHUgo
N'okpuru ngalaba HU Self-Service, pịa Ndebanye aha na Degree Planning
Iji kwado usoro ihe omume gị, pịa Atụmatụ na Schetọ oge
MyHUgo & HU Ọrụ Onwe Onye
MyHUgo bu uzo mmekorita umu akwukwo nke Mahadum Hodges ebe umu akwukwo nile nwere ike inweta oru HU Onwe ha. Na myHUgo, ịnwere ike ịnweta ozi nkeonwe gị ma duzie azụmaahịa Mahadum gị n'ịntanetị.
Mgbe ị banyere n'ọnụ ụzọ MyHUgo njikọ email gị na-egosi na isi peeji nke. Hodges ga-eji akaụntụ email nke nwa akwụkwọ gị dị ka ụzọ eji agwa gị okwu.
Nbanye na MyHugo
Kanvas bụ sistemụ Njikwa Mmụta Ọmụmụ Mahadum nke Hodges, ebe ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ nwere ike ịnweta akụrụngwa, nyefee ọrụ, ikwukọ ma rụkọta ọrụ na ntanetị.
Ihe ndi ozo & Nkwado
Mahadum Hodges nwere ndị otu IT raara onwe ha nye iji nyere ụmụ akwụkwọ aka inwe ọtụtụ ụdị teknụzụ ha nwere ike ịnwe. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịdenye ma soro arịrịọ maka nkwado teknụzụ n'ịntanetị, ma chọọ nchọpụta nsogbu onwe onye na otu esi enweta ozi. Studentsmụ akwụkwọ ga-eji adresị email Hodges ha na paswọọdụ wee banye.
IT Enyemaka oche nkwado
Akụ Ọbá Akwụkwọ
Ndị na-agụ akwụkwọ nọ ebe a iji nyere gị aka ịhọrọ ma chọta akụ. Ma ịchọrọ enyemaka na nyocha ọba akwụkwọ ma ọ bụ ịgagharị akwụkwọ ntuziaka APA, ndị ọrụ ọbá akwụkwọ dị n'onwe gị, site na ekwentị ma ọ bụ email.
Akwụkwọ ntuziaka ụmụ akwụkwọ ga-abụ ihe nduzi ka ịmalitere ma gaa n'ihu na ọrụ agụmakwụkwọ gị na Mahadum Hodges.
Mahadum Ndepụta Okwu
Akwụkwọ ndekọ aha mahadum ga-abụ ihe nduzi maka atumatu agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ akọwapụtara maka mmemme agụmakwụkwọ mahadum Hodges.
Usoro ndebanye aha na ọnọdụ na-enye nkwekọrịta dị n'etiti nwa akwụkwọ na Mahadum maka ebumnuche ndebanye aha niile.
Akwụkwọ Mmụta Mmụta
Akwụkwọ ụmụ akwụkwọ nwere ohere maka ụmụ akwụkwọ niile ebe ị ga-ahụ usoro mmụta, oge ọrụ ngalaba, akwụkwọ, na ozi ịkpọtụrụ maka ngalaba ndị ọzọ na mahadum. Mụ akwụkwọ nwere ike ịnweta ibe a site na ịbanye na MyHUgo.
Nchịkọta Enyemaka Ego
Onyinye enyemaka ego nwere ike ịnwe ngwakọta nke onyinye, mgbazinye ego, na / ma ọ bụ ego ọmụmụ ọrụ. Nnata nke onyinye ndị a dabere na ọkwa nke ego dịnụ na ntozu gị dị ka Onye Ejiri Efu nke Federal Student Aid (FAFSA) kpebiri.
Nkuzi & Fegwọ
Ndi otu akwukwo akwukwo nwere ike inye aka na ugwo, ghota ulo akwukwo na ugwo, idebe atumatu ugwo, na ndi ozo
Mahadum Hodges na-enye ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ na ụgwọ na nkeji ọnwa site na nnọkọ ahụ. Maka ozi ndị ọzọ, ụmụ akwụkwọ nwere ike ịbanye na MyHUgo ha ma gaa Ozi Akaụntụ Mmụta.
Mahadum Hodges esonyerela BankMobile iji nyekwuo nhọrọ ma nwekwuo ohere ịkwụghachi nkwụghachi gị.
Ọrụ Ndị Ochie
Ọrụ ndị agha na ndị agha
Na Mahadum Hodges, ị ga-ahụ na ịbụ Onye Enyi na Enyi abụghị naanị ihe anyị na-ekwu, ọ bụ ọkwa nkwado nke karịrị klaasị.
Ọfịs nke Mmụta Mmụta anyị nyefere ndị ndụmọdụ ụmụ akwụkwọ raara onwe ha nye nọ ebe a iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịzụlite atụmatụ agụmakwụkwọ ogologo oge ma setịpụ ebumnuche dị mkpirikpi iji nweta atụmatụ ndị ahụ.
Kpọọ ndụmọdụ gbasara agụmakwụkwọ na 800-466-0019
Ndụmọdụ Ọmụmụ Email
Ọrụ Ọrụ bụ ihe enyemaka n'efu maka ụmụ akwụkwọ na ndị okenye iji mụtakwuo banyere mpaghara ọrụ ha họọrọ na ịzụlite atụmatụ ọrụ.
Mahadum Hodges na-akwado ikike ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ iji nweta agụmakwụkwọ nha anya.
Mahadum Hodges gbalịsiri ike ịmepụta na ịnọgide na-enwe ebe mmụta ebe mmadụ niile na-ekere òkè na mmemme Mahadum nwere ike ịmụkọ ihe ọnụ na ikuku na-enweghị ụdị iyi egwu, nrigbu, ajọ mbunobi, ajọ mbunobi ma ọ bụ ụjọ.
Ikike Nzuzo (FERPA)
N'okpuru ntuziaka FERPA, ụmụ akwụkwọ nwere ikike (1) inyocha na inyocha ndekọ ụmụ akwụkwọ ha, (2) chọọ mmezigharị ihe ndekọ, (3) nkwupụta ngosi, na (4) itinye akwụkwọ mkpesa
Hodlọ Ọrụ Mahadum Hodges nke Nchedo Campus na-ebute nchekwa ụmụ akwụkwọ ụzọ n'oge ọ bụla ogige ghere oghe.
Ekele, I mechala Ntuziaka Mmụta Ọhụrụ!
Daalụ maka iwepụta oge iji mara Mahadum Hodges na ngalaba nkwado ụmụ akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ niile. Dịka nwa akwụkwọ, ị ga-enwe ike ịbanye na saịtị a n'oge ọrụ gị na Hodges. Anyị enweghị ike ichere ịhụ ka ị na-eje ije n'ofe ọkwa ahụ mgbe oge gị gụsịrị akwụkwọ!
Bụ egbe. Lee akụkụ!
Nwere ike igosi mpako ụlọ akwụkwọ gị site n'ịzụ ahịa n'ịntanetị na Hawks Store anyị. You'll ga - ahụ ọtụtụ ihe ị nwere ike iji, site na draịva USB na ndị na-eme mkpọtụ na uwe, yana Hodges Hawk! Kedu ihe na-eme ụlọ ahịa anyị iche? Maka ịzụ ahịa ọ bụla emere, otu akụkụ nke ihe ndị ritere na-aga na Hawks Scholarship Fund.
Storelọ Ahịa Hawks